Villa Somalia waxay jawaab ka bixisay warbixintii New York Times ee Farmaajo - Axadle – Axadle
Villa Somalia waxay jawaab ka bixisay warbixintii New York Times ee Farmaajo – Axadle
Muqdisho (Axadle) – Madaxtooyada Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay warbixin xasaasi ah oo lagu daabacay wargeyska New York Times oo ku saabsan sababta Madaxweyne Farmaajo u gudbiyay Baasaboorka Mareykanka, horeyna u qaatay Baasaboorka Canada isla markaana baaris ay ku soo wajahan tahay. Dowlad Goboleedka.
Agaasimaha madaxtooyada warbaahinta, C / rashiid Xaashi, ayaa beeniyay madaxweynaha markii uu Maxamed haysto dhalashada Canada, qeybna kama aheyn cabashada la sheegay in Mareykanka uu furay looga.
“Waan aqriyay waxa wargeysku qoray. Xaqiiqdi waxaa jira warar xan ah oo aan sal iyo raad laheyn. Madaxweynaha wuxuu heystaa baasaboor soomaali ah, oo horey uu uheystay mareykanka, waana kan isku soo dhiibay madaxweynaha si uu ufulin karo dhaartiisa ma jiro dal kale oo dhalashadiisa leh oo aan ahayn Soomaaliya, ”ayuu yiri.
Waxa uu carabka ku adkeeyay in Farmaajo uu heysto kaliya Baasaboorka Soomaaliya waxa uuna dhawaan u sheegay wargeyska New York Times in Farmaajo uu horay u qaatay Baasaboor Canadian ah oo aan horay loo aqoon
“Sababta uu madaxweynuhu u soo celiyey Baasaboorka Mareykanka waa sheeko dheer, oo faahfaahinteeda aan horey u soo sheegnay, iyadoo aan ka hadalno sababo kale. Madaxweynaha waligiis maxkamad lama soo taagin,” ayuu yiri agaasimaha warbaahinta madaxtooyada.
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda wax dacwad ah laguma soo oogin xilligaas Mareykanka, weligiisna maxkamad lama soo taagin.”
Cabdirashiid wuxuu meesha ka saaray in Farmaajo uu door hoggaamineed ku lahaa bulshada Buffalo wuxuuna ku tilmaamay eedeymaha ah inuu isku dayayo inuu xukunka sii hayo khiyaano.
Wuxuu ahaa aqoon yahan, siyaasad firfircoon oo Jamhuuriya iyo Dimuqraadi ah labadoodana u shaqeeyay. Laakiin ha dhigin (bulshada), looxyada ma jiri doonaan, maxaa yeelay waxaa jiray dad badan oo caan ah wayna weydiin karaan bahalka aan naqaano, ”ayuu yiri.
Warbixin cusub oo ka soo baxday New York Times ayaa daaha ka rogtay dhacdo ku saabsan noloshii Farmaajo ee Buffalo, New York, taasoo tusaale u noqon karta geeddi-socodka siyaasadeed ee uu hadda ku joogo Soomaaliya.
“Dhawr hogaamiye oo Somali-Mareykan ah ayaa leh 2007 dii muran kulul ayaa ka dhex qarxay bulshada Soomaaliyeed ee Buffalo oo uu hogaaminayo Farmaajo, waxay ahayd dhamaadka mudadii labada sano ahayd ee Farmaajo hogaaminayay, laakiin qaar ka mid ah bulshada ayaa ku eedeeyay inuu isku dayay si aad ugu sii jirto xukunka khiyaamada, warbixinta ayaa leh.
Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu ku wareejiyay dhalashada Mareykanka inta ay socoto baaritaanka waaxda canshuuraha gudaha (IRS) oo lagu baarayo dhaqaalahiisa sida ay sheegeen seddex sarkaal oo reer galbeed ah Tan ogow.
IRS waxay awood u leedahay inay baarto macaamillada lacageed iyo muwaadiniinta Mareykanka, haddii laga shakiyo, meel kasta oo ay adduunka ka joogaan. Markii uu ka tanaasulay dhalashadiisii ​​Mareykanka, Farmaajo wuxuu ka noqday xabsi uu ku hayey IRS.
Abdiwahab Ahmed 969 posts
“The Invention of Africa” ​​lastly in French
Varane Oo Macasalaameeyey Garoomada, Ramos & Mendy Oo Soo Laabtay Iyo